विचार « Bagmati Samachar
काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालको नाम लिएपछि कुल्ला गर्दा उनका खाँटी कार्यकर्तले बान्ता नगरे योग्यता नै नपुग्ने बताए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले आफूलाई सिध्याउन खोजेकाले १९ पेजको प्रस्ताव पेश गरेको बताएका छन् । आज सिन्धुलीमा कार्यकर्ताहरुसँगको छलफलमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्
काठमाडौं । १० साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले नेकपाको नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन् । वर्तमान सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको दाबी गर्दै
काठमाडौं । २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आमनागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । राष्ट्रका नाममा शुक्रबार संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी, पहिरो, प्राकृतिक विपद् र
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले अध्यक्षद्धयलाई सडक प्रदर्शन र आरोपप्रत्यरोप रोक्न माग गरेका छन् । बिहीबार नेताहरु घनश्याम भुषाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी,
डा. डिला संग्रौला काठमाडौं । २२ असार । सरकार जनताको अविभावक हो । वर्तमान सरकार आएदेखि नै समस्यै समस्या र काण्डै काण्डबीच अल्मलिएको बाटो बिराएको यात्री जस्तै देखिन्छ । उद्देश्यविहीन
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकः ओली अनुपस्थिति प्रचण्डमाथिको भरथेग कि स्वास्थ्य समस्या ?
काठमाडौं । १४ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी छ । १० असारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको
सरकारबाट हटाउछु भन्ने नचिताए हुन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । १४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुलाई सरकारबाट हटाउन लागिपरेको बताएका छन् । आज मदन भण्डारीको ६९औं जन्मदिनको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई नयाँ नक्सा प्रकरणपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुढृढ गर्ने महान् अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँः प्रचण्ड (संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । ३१ जेठ । केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास